सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड खोप अभियानको पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा खोपको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? कोरोना खोप भित्रिएपछिको नेपालको अवस्था कस्तो देखिदै छ ?
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट सुरु भएको खोप लगाउने अभियान देशैभर सञ्चालन भयो। पहिलो चरणको खोप विभिन्न अस्पतालका निर्देशकदेखि विभिन्न रोग विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न खोप केन्द्रबाट खोप लगाएका थिए।
छोटकरीमा : पहिलोपटक कोरोना खोप लगाउनेहरू के भन्छन् ?
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान संचालन भएको दोस्रो दिन २८ हजार ७३२ व्यक्तिहरुले खोप लगाएका थिए। यस्तै, अहिलेसम्म कसैलाई पनि यसको कुनै नकरात्मक प्रभाव र स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको सरकारले बताउँदै आइरहेको छ।
छोटकरीमा : कोभिड खोप अभियानको दोस्रो दिन, खोप लगाउनेको संख्या कति पुग्यो ?
माघ १४ गते सुरु गरिएको खोप अभियानमा तेस्रो दिनसम्म आउँदा खोप लगाउने व्यक्ति बढेको देखिन्छ । अहिलेसम्म कसैलाई पनि यसको कुनै नकरात्मक प्रभाव र स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकाले खोप लगाउनेको संख्या बढेको हो।
छोटकरीमा : तेस्रो दिनसम्म आउँदा खोप लगाउने व्यक्ति बढे
शनिबारसम्म देशभर ६४ हजार चार सय २२ जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिबारसम्म ७७ जिल्लाका एक सय ४३ खोपकेन्द्रबाट खोप वितरण भइरहेको थियो।
कोभिडविरुद्धको खोप अभियानअन्तगर्गत पौष १८ गते आइतबार (पाँचौं दिन) मुलुकभर ७७ जिल्लाका १ सय ८५ खोप केन्द्रबाट २३ हजार ५ सय ८५ जनाले खोप लगाए। आइतबारसम्म आइपुग्दा कुल ८८ हजार ७ जनाले खोप लगाइसकेका छन्।
पहिलो दिन ९ हजार ८४,
दोस्रो दिन १९ हजार ६ सय ४८,
तेस्रो दिन १७ हजार ४ सय ६५
र चौथो दिन १४ हजार ८ सय ९४ जनाले कोरोनाको खोप लगाएका हुन्।
आइतबार पनि २३ हजार ५ सय ८५ जनाले लगाए कोभिडविरुद्धको खोप
सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो डोज लगाएको २८ दिनपछि मात्रै दोस्रो डोज खोप दिने भनिएको छ। त्यसपछि मात्र खोप प्रक्रिया पूरा हुन्छ। त्यसैले दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुन नै अझै करिब डेढ महिना लाग्ने अवस्था देखिएको छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर दैनिक औसत ४४ लाख ७० हजार डोज खोप विश्वभर लगाइने गरिएको छ। ब्लुमबर्गले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६२ देशमा खोप लगाउने काम सुरु भएको छ ।
खोप : थप अनुदान आस, खरिदमा अलमल
दक्षिणी छिमेकी भारतपछि अब उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अनुदान सहयोगमा दिने भएको छ । चीनले नेपाललाई ३ लाख डोजको कोरोना खोप अनुदान सहयोग गर्ने भएको हो ।